Fedora 34 dia mikasa ny hampiasa PipeWire ho an'ny feo fa tsy PulseAudio | Avy amin'ny Linux
Navoaka ireo mpamorona Fedora Vao haingana inona ho ny dikan-teny manaraka an'ny Fedora 34, fanovana lehibe no kasaina hatao for stream audio rehetra avy amin'ny mpizara feo PulseAudio sy JACK mankany PipeWire.
Mampiasa PipeWire mamela anao hanolotra fahaiza-manao fanodinana feo matihanina Amin'ny fanontana birao mahazatra, esory ny sombintsombiny ary ampitambatra ireo fotodrafitrasao ho an'ny rindranasa samihafa.
Amin'izao fotoana izao, Fedora Workstation dia mampiasa ny fizotry ny fiafaran'ny PulseAudio ho an'ny fanodinana feo, ary ny rindranasa dia mampiasa ny tranomboky ho an'ny mpanjifa mba hifaneraserana amin'ity fizotrany ity, afangaroy sy hitantanana ny onjam-peo. Ny fanodinana feo matihanina dia mampiasa ny mpizara JACK ary ny tranomboky ho an'ny mpanjifa mifandraika amin'izany.
Raha tokony PulseAudio sy JACK dia soso-kevitra hampiasa mpizara media PipeWire Ny taranaka ho avy miaraka amina sosona iraisana izay hitazonana ny mpanjifa PulseAudio sy JACK efa misy ary mandeha hatrany amina endrika Flatpak.
Ho an'ireo mpanjifa efa zokinjokiny mampiasa ny API ambany ambaratonga ALSA dia hapetraka ny plugin ALSA izay mandeha mivantana any amin'ny PipeWire. Ny rindranasa PulseAudio sy JACK rehetra dia afaka mandeha amin'ny PipeWire, nefa tsy mila mametraka PulseAudio sy JACK.
Ity tolo-kevitra ity dia ny fanoloana ny daemon PulseAudio miaraka amina fampiharana mifanaraka amin'ny PipeWire miorina. Midika izany fa ny mpanjifa efa misy rehetra izay mampiasa ny PulseAudio Client Library dia hitohy hiasa toy ny teo aloha, ary koa ireo fangatahana nalefa ho Flatpak.
Ny audio PRO rehetra dia tantanan'ny tranokalan'ny mpanjifa JACK, izay miresaka amin'ny mpizara JACK. Ity tolo-kevitra ity dia hametraka fanoloana tranombokin'ny mpanjifa JACK izay miresaka mivantana amin'ny PipeWire. Ny rindranasa jack audio PRO efa misy rehetra dia hiasa amin'ny PipeWire avy eo.
Raha tsiahivina, PipeWire dia manitatra ny fahafaha-manao PulseAudio miaraka amin'ny streaming video, fanodinana feo ambany latency ary maodely fiarovana vaovao ho an'ny fifehezana fidirana sy fidirana amin'ny fitaovana.
PipeWire manome ihany koa ny fahafaha-mifehy ny loharanom-pahalalana video toy ny fitaovana hakana horonan-tsary, webcam na votoatin'ny efijery fampiharana. Mifanaraka amin'ny GNOME ilay tetikasa ary efa be mpampiasa amin'ny Fedora Linux ho an'ny fandefasana seho sy fizarana horonantsary amin'ny tontolo iainana any Wayland.
PipeWire dia afaka miasa toy ny mpizara feo latency ambany ihany koa miaraka amin'ny fampiasa izay manambatra ny fahaizan'ny PulseAudio sy ny JACK, na dia ho an'ny filàn'ny rafitra fanodinana feo matihanina izay tsy azon'i PulseAudio hitakiana aza.
Ary koa, PipeWire manolotra maodely fiarovana nohatsaraina Izy io dia ahafahana mifehy ny fidirana manokana sy manokana an'ny renirano ary manamora ny fivezivezan'ny feo sy horonan-tsary mankany amin'ireo kaontenera mitoka-monina.
Haka sy handefa feo sy horonan-tsary mihetsika miaraka amina lag kely farafahakeliny.
Fitaovana fanodinana horonantsary sy horonan-tsary amin'ny fotoana tena izy.
Maritrano maromaro misy kofehy mamela ny fizarana atiny eo amin'ireo rindranasa marobe. Ny fitantanana sy ny fikirakirana ny haino aman-jery multimedia dia atao amin'ny fomba samihafa.
Modely fanodinana mifototra amin'ny sary an'ny node multimedia miaraka amin'ny fanohanana ny tadivavarana sy ny fanavaozana ny sary atika.
Avela hampifandray ireo mpamily na ao anatin'ny mpizara na ao amin'ny plugins ivelany.
Fifanarahana mahomby mba hidirana amin'ny renirano horonantsary amin'ny alàlan'ny famindrana ireo mpandika rakitra sy fidirana amin'ny feo amin'ny alàlan'ny buffer iraisana.
Ny fahaizana mandrindra angona multimedia avy amin'ny dingana rehetra.
Ny fisian'ny plugin ho an'ny GStreamer hanatsorana ny fampidirana amin'ireo rindranasa efa misy.
Fanohanana ny tontolon'ny boaty fasika sy Flatpak.
Tohano ny plugins amin'ny endrika SPA (Simple Plugin API) ary ny fahaizana mamorona plugins izay miasa amin'ny fotoana tena izy.
Rafitra malefaka amin'ny fandrindrana ireo endrika haino aman-jery ampiasaina sy ny fizarana buffer.
Mampiasa dingana tokana handefasana feo sy horonan-tsary. Fahaizana miasa amin'ny maha-mpizara feo anao, foibe hanomezana horonan-tsary ho an'ireo rindranasa (ohatra, ho an'ny gnome-shell screencast API), ary mpizara iray hifehezana ny fidirana amin'ireo fitaovana fakana horonantsary fitaovana.
Ary farany, ny fanovana dia mbola tsy nodinihan'ny komity mpitantana injeniera Fedora (FESCo), izay tompon'andraikitra amin'ny fampandrosoana teknika ny fizarana Fedora.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Fedora 34 dia mikasa ny hampiasa PipeWire ho an'ny feo fa tsy PulseAudio